Afar Maraykan oo ay dileen burcad - BBC Somali
Afar Maraykan oo ay dileen burcad
22 Febraayo 2011
Afar markab oo kuwa dagaalka Maraykanka ah oo uu ku jiro mid diyaaradaha xambaara ayaa dabajoogay doonta oo ku sii jeedday xeebaha dalka Soomaaliya.
Madaxwaynaha Maraykanka Barack Obama ayaa amray in awood military loo adeegsado si loo sii daayo la haystayaasha balse ciidamada ayaa wali isku dayayay in ay la xaajoodaan burcadda si loo soo daayo.
Laba burcadbadeed ayaa saarnaa mid ka mid ah maraakiibta oo kala hadlayay Maraykanka waxa ay dalbanayaan markii, sida ciidamada Maraykanku leeyihiin, gantaal laga soo riday qoriga Seven-ka ama baasuukaha la soo aadiyay dhanka maraakiibta daaalka Maraykanka.
Kadibna ay maqleen rasaas ka soo dhacaysa Doonta.
Sida cad qaar ka mid ah burcad badeedda ayaa is dhiibay iyagoo gacmaha kor u taagay, kadibna ay ciidamada gaarka ah ee Maraykanku doonta fuuleen.
Mark Fox oo ah madaxa ciidamada badda Maraykanka ee ka hortagga burcad badeedda, ayaa sheegay in wax rasaas ah aanay ciidamadu ridin intii ay doonta dusha uga dhacayeen: "ma jiraan rasaas ay rideen kooxda ciidanka ah ee fuushay doonta, rasaasta dhacday waxay ahayd tan RPG, bomb-ada qoriga la tuuro oo lagu riday markabka dagaal ee Sterett, kadibna markii ay doonta koreen waxaa saarnaa maydka laba burcad-badeed. Waxaa kaloo saarnaa la haystayaasha oo dhaawac. Wax kale oo rasaas ah ma dhicin."
Ciidamada gaarka ah waxay gaareen afarta la hayste oo ay arkeen in rasaas ay ku dhacday. Inkastoo ay isku dayeen in ay badbaadiyaanna ay isla goobta ku dhinteen.
Laba kale oo burcad-badeed ah ayaa iyaguna la dilay intii howlgalku socday, 15 kalena waxay hadda ku jiraan gacanta ciidamada Maraykanka.
Scott and Jean Adam waxay ka yimaadeen gobolka California ee dalka Maraykanka, iyadoo Phyllis Macay iyo Bob Riggle ay ka tageen Seattle aduunka ayayna doonta ku marayeen.
Waxay joojiyeen in ay saaxiibadooda email u soo diraan dhowr maalmood ka hor, iyadoo ujeedadoodu tahay kana walwalsanaa in burcad-badeeddu hesho halka ay ku sugan yihiin ama doontoodu ay marayso.
Nina Crossland oo ay eeddo u tahay Phyllis Macay, ayaa ka hadashay: "Eddaday waxay ahayd qof aad u xirfad badan oo ah bad-maaxe la yaab leh. Waxay riyadan ku noolayd hadda sanadkii sadexaad. Waxaan fahamsanayn in hadii xeebta laga dajiyo ay xaaladdu dhab ahaan sii xumaan lahayd, isla markaan ciidamada baddu ay ku dadaalayeen in ay ka hortagaan in xeebaha lala tago, taas ayaana rajo na yara galisay."
Paul iyo Rachel Chandler oo ahaa laba lamaane oo la afduubay sanadkii 2009 ayaa la geeyay gudaha Soomaaliya dhul miyi ah oo fog. Kadib markii in ka badan sanad la haystay ayaa la sii daayay. Waxaa la hadal hayay in lacag badan oo madax furasho ah la bixiyay.
Burcad-badeednimada ayaa noqotay ganacsi lacag badan laga helo. Waxaana sii adkaanaysa in wax laga qabto.
Waxaa jira ilaa 34 markab oo 14 dal oo kala duwan laga leeyahay oo ilaaliya xeebaha Soomaaliya.
Xoghayaha arrimaha dibedda Maraykanka Hillary Clinton ayaa ku baaqday in dalal badan ay bixiyaan maalgalinta, si wax looga qabto wax ay ku tilmaantay dhibaato guud oo dhinaca amniga ah.